Petunia | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Na-eto eto petunias n'ụlọ
Ihe kachasị ndị niile hụrụ ụlọ ime ụlọ maara nke ọma na ọ bụ petunias. A na-ahụkarị ya n'ogige ntụrụndụ, n'ámá, hụrụ na balconies na loggia. N'elu n'èzí na-akụkarị obere petunia. Ụdị Terry n'okpuru ike nke ifufe ma ọ bụ mmiri ozuzo na-agwụ ngwa ngwa wee kwụsị ịma mma ha niile. Ọ bụrụ na ị na-etolite n'ụlọ n'ụlọ ma na-elekọta ya, ọ dị mfe ime ya;
Petunia fatịlaịza ihe nzuzo: otú e si na-eri nri a osisi maka ọtụtụ okooko osisi
N'oge opupu ihe ubi na oge okpomọkụ, ịchọrọ ime ihe dị mma n'anya gị, chọọ ụlọ gị, mbara ihu na sill na okooko osisi, mee nkasi obi gburugburu gị ma mara mma. Enwere otutu umu osisi. Ị nwere ike itolite onwe gị ma ọ bụ ịzụta kụrụ n'ime ite. Ebe mbụ dị iche iche, ọmarịcha agba na ịma mma bụ petunia.